प्रधानमन्त्री ओलीको बारेमा भ्रामक समाचार पोस्ट गर्ने मानन्धर पक्राउ – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर प्रधानमन्त्री ओलीको बारेमा भ्रामक समाचार पोस्ट गर्ने मानन्धर पक्राउ
प्रधानमन्त्री ओलीको बारेमा भ्रामक समाचार पोस्ट गर्ने मानन्धर पक्राउ
काठमाडौं,१४ कार्तिक – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा भ्रामक समाचार लेखेर प्रकाशन गर्ने एकजनालाई पत्रकारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मंगलबार प्रहरीले पाथिभरा अनलइन डटममा भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशित गर्ने स्याङजा घर भइ काठमाडौं कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका ८ बस्ने ४६ वर्षीय हरिप्रसाद मानन्धरलाई पक्राउ गरेको हो।महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले मानन्धरलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले मानन्धरलाई विद्युतीय अपराध तथा कसुर अन्तर्गत कारबाही सुर गरेको बताएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल र केही डिजिटल मिडियाबाट आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा आधारहित प्रचार भएकोप्रति आपत्ति जनाएका थिए। मंगलबार साँझ अस्पतालबाटै सन्देश सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अनावश्यक रुपमा सनसनी बनाएर गरिएका प्रचारवाजीबारे आफू जानकार रहेको भन्दै आपत्ति बताएका हुन्।
यो पनि पढ्नुहोस् -खानेपानी संस्थानमा करोडौं घोटाला, महाप्रबन्धकसहित ५ जनालाई कारबाही सिफारिस
काठमाडौं १४ कार्तिक – छानबिन समितिले सामान खरिदमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला गरेको ठहर्‍याउँदै खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसादलगायत पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । घोटालाकै कारण संस्थानलाई २५ करोड रुपैयाँ घाटा भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्-डा. भक्तमान श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी ठहर, एक वर्ष कैदको सजाय
काठमाडौं १४ कार्तिक- विशेष अदालतले भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. भक्तमान श्रेष्ठलाई गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको अभियोगमा भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ।
अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी र सदस्यहरु रत्नबहादुर बागचन्द र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ बैद्यको इजलासले श्रेष्ठलाई १ करोड १८ लाख ६६ हजार ७७६ गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको ठहर गरेको हो। श्रेष्ठलाई एक वर्ष कैद हुने ठहरसमेत गरेको विशेष अदालतका रजिष्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठले बताए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७२ साल फागुन २ गते श्रेष्ठ र उनकी पत्नीविरुद्ध १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
२०५४ साल साउन १ गते सेवा प्रवेश गरेका भक्तमानको २०७० साल साउन ४ गतेसम्मको सम्पत्ति मूल्यांकन भएको थियो। त्यसक्रममा तीन करोड ७९ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेकोमा एक करोड ८५ लाख रुपैयाँमात्रै वैध देखिएको अख्तियारको दाबी थियो। अख्तियारले उनकी पत्नी शिलुलाई समेत प्रतिवादी बनाएको थियो। कान्तिपुरबाट